KUVELA EZITHI UHLATSHWAYO AKASENEME KWI-BUCS - Ilanga News
Home Ezemidlalo KUVELA EZITHI UHLATSHWAYO AKASENEME KWI-BUCS
KUVELA EZITHI UHLATSHWAYO AKASENEME KWI-BUCS
INGASE ilahlekelwe yisitobha esinesipiliyoni i-Orlando Pirates okuvela ukuthi sifuna ukuhamba kule kilabhu. IBucs yamemezela ukuthi ibambe ufishi omkhulu isayinisa uThulani “Tyson” Hlatshwayo (32), owayengukaputeni weBidvest Wits engasekho neqembu lesizwe laseNingizimu Afrika, iBafana Bafana. Lo mdlali kwakubhekwe ukuba ayoqinisa udonga lweBucs obekukhalwa kakhulu ngalo ukuthi luyavuza. Nokho izinto zavele zabheda kakhulu kunakuqala njengoba uHlatshwayo wavele waphenduka ikhongco elibuthaka.
Ubenza amaphutha awubungane, okuholele ekutheni agcine esenuka iqaqa kubalandeli beBucs. Leli phephandaba lihoshe ngemithombo yalo esondelene nalo mdlali ukuthi akaseneme neze kwi-Bucs, ufuna ukuhamba. Umthombo waleli phephandaba uthe: “UHlatshwayo uyabona ukuthi iPirates kayimvumi, akaseneme neze ufuna ukuhamba. “Akukhona ngoba ehlulekile, wukuthi kunezingqinamba abhekene nazo engingeke ngikwazi ukuzidalula ngoba zibucayi.”Yena kodwa ufuna ukushiya kwiBucs.
“Akhona amakilabhu akhombisa ukumthanda yikhona ukuthi kawakhulumi into eqondile,’’ kusho lo mthombo. Imizamo yokuthola uHlatshwayo ukuba aphawule ngalolu daba, iphunzile njengoba ucingo lwakhe belukhalam kodwa lungabanjwa.
Previous article09 JUNE 2022
Next articleKUMENELE UTHISHA ODUTSHULWE ESIKOLENI